Insimbi engagqwali indaba ethandwa kakhulu kuyiphi iziqukathi nezinto ezenziwe nabo ukudla. Insimbi engagqwali has ezinhle anticorrosion izakhiwo, ukuqina kanye isisindo ukukhanya. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi le nto akuyona njalo amelana abezindaba nolaka, e Kulokhu, izingoma ekhethekile ezidliwayo.
Yiqiniso, esitolo ukudla ubhedu steel noma ingilazi esitsheni, njengoba othandwayo namuhla penopropilena alihlangani zonke izidingo ezidingekayo. Ngaphezu kwalokho, ukuphila inkonzo yayo ingaphansi kakhulu kunalelo imikhiqizo ezenziwe ngensimbi.
Abaningi uyazibuza kanjani ukuhlukanisa ukudla kusuka engagqwali impahla engafanele isitoreji ukudla? Ukuze siphendule lo mbuzo, kubalulekile ukuba sicabangele izinzuzo, izici kanye Ukwahlukaniswa kwamadamu metal.
Izinzuzo insimbi engagqwali
Uma sikhuluma izinzuzo ukudla insimbi engagqwali, kubalulekile ukugqamisa:
Ukumelana impahla kumakhemikhali kakhulu;
nokonakala Wokulawula of izinsimbi ezisindayo.
Ngaphezu kwalokho, kakade kungase kutholakale ukuthi esikhundleni ukuthosa okuzikhulula-non stick enamathela kungcono kakhulu ukusebenzisa izinto ezenzelwe ukudla grade insimbi engagqwali. Kusukela ukwaziswa okufanayo wenza okungcono ukupheka isitofu esiqandisini ebusweni.
Yini kubhekwa engagqwali ukudla
Insimbi engagqwali, efanelekayo ukugcina kanye ukupheka imikhiqizo ukudla - metal doped kakhulu, okubandakanya 25% chromium. Yingenxa yalesi chemical isici Alloys zaziwa ngezici zazo anti-ukugqwala. Uma ukuxhumana imvelo ezingcolile-surface metal ekhiqizwa ifilimu okhethekile zokuzivikela. Ngenxa yalesi sendlalelo kobuso metal kungaqali ukugqwala.
Ngaphezu kwalokho, ukudla ukungezwa titanium, insimbi engagqwali, molybdenum, nickel, nezinye yizici zamakhemikhali, eminye okwandisa nokumelana ukugqwala material.
grade GOST insimbi engagqwali
Uma sikhuluma amazinga isimo ke kungukuthi lelipelwe imithetho ephathelene insimbi engagqwali. Yingakho izazi bakuthola kunzima ukuphendula, onjani impahla Kunconywa ukusetshenziswa embonini yezokudla. abakhiqizi of engagqwali zensimbi ithuba baphendule ukuthi, kungakhathaliseki brand kufanelekile ukudla.
Ingabe ngempela kumthethonkombiso akashongo lutho ukudla insimbi engagqwali? GOST 5632-72 - lena cishe esiseduzane idokhumenti ejwayelekile engasetshenziswa ekukhetheni ingxubevange kangcono ukusetshenziswa ekhaya. Le ndinganiso libhekisela State kumaka high ingxubevange steel futhi ukugqwala ukumelana futhi ukushisa ukumelana Alloys. Ake sicabangele le ngezigaba.
Ngaphansi kwalo brand ekhiqizwa austenitic ukugqwala ukumelana insimbi engagqwali. uzakwabo European - Aisi 304. Lokhu kwaziswa akuyona kazibuthe. It is ezisetshenziswa kuyo yonke imikhakha yezimboni futhi commercial.
Lokhu kwaziswa libhekene amanani aphansi, nekhwalithi omuhle. Livame ukusetshenziswa endaweni yokudla, kodwa kuphela ngaphansi kombandela wokuthi kwensimbi ngeke ukuxhumana izixazululo caustic noma sulfamic.
okulingana YaseYurophu loluphawu - Aisi 321. Lokhu steel ukushisa ukumelana futhi kazibuthe. Insimbi engagqwali lokhu grade ngokuvamile lisetshenziswa womshini izingxenye nokufakwa kuhhavini, ukushisa kanye qeda izinhlelo wabantu abaqoqa. Into wukuthi lokhu steel kufanelekile ukusetshenziswa ngamazinga ashisa kakhulu lamadigri 600 kuya ku-800.
uzakwabo European lokhu okokusebenza Aisi 409. Lokhu steel kabanzi lisetshenziswe womshini izinto ukupheka Cutlery. ukudla okunjalo insimbi engagqwali ivamile ezitolo. Ngakho impahla ethandwa kwakubangelwa izinga eliphakeme adhesion kanye nekhono ukuzivumelanisa nezimo yokusebenza ehlukile.
Lokhu dish kungenziwa alondolozwa ngokuphepha ukushisa noma imikhiqizo yakhe efrijini.
Lezinsimbi yalolu hlobo kungokwalabo esigabeni materials esiyinhlanganisela, ngakho-ke livame ukusetshenziswa womshini yasendlini nokugeza zezimboni, kanye ukwenziwa ware sanitary noma ukwelashwa ukushisa imikhiqizo ukudla. okulingana European yalesi brand - Aisi 420. Uma izitsha kukhona enye yalezi amalebula, kungaba ngokuphepha ukuthenga ukusetshenziswa ekhaya. Lokhu insimbi engagqwali akusho nokugqwala, kuba amelana kweso lokushisa, futhi impahla ngempela pliable futhi iqine.
EYurophu lehla ngokushesha inani le nto ekhiqizwa nge wokugubha steel Aisi 410. Lolu hlobo yikhona okujwayelke asetshenziswe ekukhiqizeni amanye amathuluzi iwayini ukwenza, ukucutshungulwa ukudla womshini utshwala. Ngaphezu kwalokho, le nto has lokushisa amandla okusezingeni eliphezulu ngaphansi imvelo kancane nolaka.
EYurophu lehla ngokushesha inani le steel ikhiqizwa ngaphansi brand insimbi engagqwali Aisi 430. Lena kubalulekile, uma ukudla ware is baphathwa ezishisayo. Lezinsimbi yalolu hlobo kuyahluka amandla eliphezulu kakhulu. Nokho, le nto ngokushesha zikhubazekile e konemimoya sulfuric. Kulokhu, insimbi engagqwali akusho nokugqwala futhi zingamelana imithwalo lokukhanda. Lokhu kwaziswa Kunconywa ukuthenga kuso, njengoba 08H17 elinesimo conductivity eliphezulu ezishisayo.
Zonke ezinye izinto ezisetshenziswa ezimweni ezikhethekile, izindleko zabo iphezulu kakhulu. Nokho, akubona bonke insimbi engagqwali ingasetshenziswa yini ngokuphepha okupheka isitoreji ukudla. Ukuze lokumba umehluko phakathi engagqwali ukudla kusukela lobuchwepheshe, lula kakhulu ukufunda eziningi izincomo ewusizo. Bayoba ngokushesha ukunquma ukufaneleka le nto ngoba ukudla. Kuyasiza ukwazi umthengi ngamunye, ngepilo yakhe.
Indlela ukuhlukanisa engagqwali ukudla kusukela lobuchwepheshe?
Ukuze ubone ukuthi indlela yokwakheka ukugqwala ukumelana ingxubevange, kanye kungenzeka yokusetshenziswa kwawo ekuphileni kwansuku zonke, singakwazi ukubhala phansi sha, okuye abalwe ngenhla. Uma kophawu enjalo kuwufanele ku izitsha, kufanelekile ukupheka nokugcina ukudla.
Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi phambi kwamehlo indaba ye-brand engaziwa, futhi umdayisi ungibelesela ngokuthi lokhu ingxubevange - ngokuphelele imvelo futhi awukwazi balimaza abantu. Kulokhu kwanele ukubeka zensimbi isixazululo amaphesenti-2 ka-acetic bese ulinda ukuphendula. Uma into oyifundayo umthunzi ishintshile, kwaba mnyama, khona-ke kungcono hhayi ukuyisebenzisa. umbala njalo bathi insimbi engagqwali ngempela ukudla. Ingasetshenziselwa.
Kukhona enye indlela evame ukusetshenziswa abathengi kokuba ufunde ulwazi mayelana nendlela ukucacisa ukudla insimbi engagqwali. Basebenzisa le uzibuthe. Kodwa-ke kudingeka ukuba uqonde ukuthi le ndlela kuyinto ngokuphelele ngeze, ngoba insimbi engagqwali kuyinto magnityaschayasya futhi nemagnityaschayasya. Ngakho, ukusetshenziswa uzibuthe akusho ukukusiza ukunquma ukuthi ungasebenzisa indaba for ukudla.
Ukuze ukhethe metal engcono, ulwazi kuwufanele ukuhlola mayelana nomkhiqizo bese ucela umthengisi ohambisana imibhalo. Noma yimuphi izitsha kumele kwenziwe ngokuhambisana nemithetho nezidingo. Uma umkhiqizo ayifani, bese kusuka enjalo umkhiqizo kufanele uyekwe. Uma kungenjalo, ungathenga yekhwalithi ephansi kanye nezitsha kuyingozi empilweni yomuntu.
Machining metal: izindlela, amathuluzi kanye nemishini
Ukuhlaziya ekukhiqizeni nokudayiswa kwemikhiqizo kanye izingxenye
Yini omnene ingilazi: imininingwane ukukhiqizwa, ukucubungula izicelo
KrAZ umlando isitshalo, izimoto. Kremenchug Automobile Plant
Ukugqwala inhibitor. izindlela ukuvikelwa ukugqwala
Ukumiswa "ESILANDELAYO ESITHI" ( "iNsephe"): isithombe, ukulungisa
Kungani kuwa amafutha? Intengo yamafutha iwa: izimbangela, imiphumela
Okuncane kanye degree esiphezulu namachibi of uxhumano lokudlulisa. izakhiwo Chemical of uxhumano lokudlulisa
Gymnastics ngoba umgogodla: Ukuzivocavoca kanye nezinqubo
Korean Chrysanthemum: zokutshala ubuqili anakekele kumiswa amaqoqo
Umuthi 'Paxil ": yokusetshenziswa
Magciwane "Nika-2": imfundo kanye nencazelo
Ithambo Ethmoid Yekhanda. amathambo Kubhangqiwe futhi ayibhangqiwe Yekhanda